ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ပြိုကွဲ၏နာကျင်မှုကိုသက်သာနည်း
ထိုစကားကိုအဝင်အဖြစ်, တက်ကိုချိုးဖောက်လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်. သင်နှင့်အတူမည်သည့်ခံစားချက်များသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသယ်ဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဆိုပါက, အခြားသူတစ်ဦးထိခိုက်ရှောင်ရှားရန်, ပယ်ကိုချိုးဖောက်ရန်သင့်ချဉ်းကပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်ဖို့အရေးကြီးတယ်က. သင့်လျော်သောချိုး-up ကရှေ့တွင်သင်နှင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရပြီအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအပေါ်အကြီးအကျယ်မူတည်, ဘယ်လောက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးသည်, နှင့်ခံစားချက်တွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရှိမရှိသို့မဟုတ်မ.
မည်သည့်လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အခါလူတန်းစားနဲ့သနားကရုဏာစိတ်နှင့်ပြုပါရန်ကြိုးစား. ဒါကြောင့်အမှုအရာဖြတ်ဖို့အချိန်အခါဒီနေရာတွင်လိုက်နာသင့်ပါသည်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များမှာ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဆကျဆံရေးနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုမှတ်မိကွဲပြားခြားနားသည်, တုန့်ပြန်အဖြစ်မမျှော်လင့်ဘဲမျှော်လင့်.
ထိုအရပ်၌မရှိကြသည်ကိုတွေ့လျှင်တက်ချိုးဖောက်ဆင်ခြေတက်အောင်မကြိုးစားပါနဲ့. ဆက်ဆံရေးသင့်အဘို့အလုပ်မလုပ်ဘူးဘာကြောင့်ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကိုပြောပြ. သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမကို IIT နို့တိုက်ကျွေးမှုသင်မယ်, က Mei လိုင်းသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆင်းလွယ်ကူတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေမယ့်, ဒါပေမဲ့သူသို့မဟုတ်သူသည်ဤမှတဆင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိမြင်ရလိမ့်မည်နှင့်ပင်သူတို့ ပို. အကျိုးပျက်နှင့်ကြေကွဲစရာဖြစ်ပေါ်စေသူတို့မချစ်လို့ဘာအကြောင်းပြချက်တက်စေခြင်းငှါ.
နှစ်ပါးသွားမ String ကိုကျင့်ကြ
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီဆိုပါက, သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုထွက် drag ဖို့မလိုပါဖြစ်ပါသည်. ပြိုကွဲကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ပို. ပို. ကြီးထွားလာပူးတွဲပါလိမ့်မည်, သင်သည်ဆက်ဆက်မလိုချင်ကြဘူးတစ်ခုခု. သင်ကဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်စေလိုတဲ့အချိန်မှာ, သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပိုကောင်းလာစေဖို့ဆက်လက်မဖွံ့ဖြိုးပါဘူးဒါကြောင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်မကြာမီသင့်လျော်စွာဖြစ်နိုင်ဖြစ်သကဲ့သို့သိကြကုန်အံ့.
သူတို့ကိုချစ်နေဆဲဖြစ်သည့်အခါစွန့်ပစ်ခံရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုနားထောင်စေလိုသည်နောက်ဆုံးသောအရာတစုံတခု II ကယ့်ကိုကိုယ့်friendsîအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်လုပ်ချင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးတည်ဆောက်စေခြင်းငှါမကြိုးစားခင်သင့်အပေါ်မှာရရှိရန်အချိန်အတန်ကြာအတူတက်ကိုချိုးဖောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးရန်စိုးရိမ်ပူပန်အလုံးစုံတို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်၏. လည်း, သင်ကအခြားလူတစ်ဦးကိုဆဲသင့်အဘို့အခံစားချက်များ harbors သိရှိလျှင်benefitsîဆက်ဆံရေးìfriendsဖို့စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲစေမကြိုးစားပါဘူး. ဤသည်အခြားသူတစ်ဦးကိုသင်သည့်အခါအချစ်ဇာတ်လမ်း rekindle ချင်သောမှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်ပေးမည်အကြောင်း, လက်တွေ့မှာတော့, သင်မလုပ်ဘူး. ဒီအရှုပ်အထွေးမှဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တွင်စိတ်ထိခိုက်နိုင်.
ပုဂ္ဂလိကခုနှစ်တွင် Up ကိုချိုးဖျက်
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတက်ကိုချိုးတဲ့အခါအများပြည်သူနေရာအရပ်၌ရှိကြ၏ရုံကြောင့်သင်တို့ကိုအောင်မြင်စွာမြင်ကွင်းတစ်ခုအောင်မှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုရပ်တန့်မည်ဟုမထင်ပါနဲ့. တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခိုင်ခံ့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအခြားလူများပတ်လည်နေသောမည်မျှနေပါစေအသက်ဆုံးမရနိုင်ပါ. သင်စွန့်ပစ်ခံရ၏စိတ်ဖိစီးမှု၏ထိပ်ပေါ်မှာမည့်အလားအလာများကအောက်အခြေအနေမျိုးကိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ချပြီးတဲ့အများပြည်သူအရပ်ဌာန၌တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတက်ကိုချိုးဖောက်. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအပေါ်ရိုသေလေးစားမှုမရှိခြင်းကိုပြသ. တက် Breaking ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအရှက်မပါဘဲဖော်ပြနိုင်အောင်ပုဂ္ဂလိကအတွက်ပြုသင့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်.
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဘယ်လိုနေပါစေ, သင်ရှိရာသို့သူတို့ကိုရှိသည်လိုသည်အတိုင်းအခြားသူများအားတို့၌ပြု N အမြဲစိတ်ထဲရှိရွှေစည်းမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးက. သင်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်, သင်ကအခြားလူတစ်ဦးကိုသင်ဦးတည်ရိုးသားမှု, လေးစားမှုကိုပြသလို. မဟာဗျူဟာကသင့်ရဲ့ချိုးတက်ပြင်ဆင်နေသည့်အခါစိတ်ကိုဒီ Keep. အခြေအနေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ခဲ့ကြလျှင်သင်ကုသခံရဖို့မျှော်လင့်လိုဘယ်လိုထက်ထုံးစံမဆိုလျော့နည်းအတွက်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကုသမထားပါနဲ့.